Mmemme R3 na Onyinye na Illinois - Weghachi. Enweghachi Emeghari ohuru.
Weghachi. Enweghachi Emeghari ohuru. Mmemme R3 na Illinois
Ihe omume R3 na-enye Onyinye na Illinois Emepụtara ka ọ bụrụ ụzọ iji dozie ụfọdụ ihe ọjọọ nke War on ọgwụ. O meela ọkwa na nso nso a na, ka ọnwa Mee 19, 2020, kenyere Illinois $ 31.5 n'ụtụ ụtụ isi maka mmemme R3. Ọ bụrụ n’inweghị uru, ọchịchị obodo, ma ọ bụ ọgbakọ obodo ọzọ, inwere ike inweta enyemaka ihe omume R3. Enyemaka R3 ga-akwado òtù dị iche iche na-arụ ọrụ na mpaghara ise ndị a:
Mgbochi Ime Ihe Ike
Lelee ntozu mmemme R3 gị Ebe a.
EBIGBO EGO: Etu ị ga-esi mepee ụlọ akwụkwọ Cannabis na Illinois
EBIGBO EGO: Etu esi etolite azumahia Cannabis gi
Chọrọ Inweta Ego R3?
Onyinye ego R3 na Illinois
Ijere ndị obodo Illinois bụ maka ọdịmma anyị niile. Ọ bụrụ na anyị ga-ahụ ihe anyị nwere ike ịgbanwe ruo n’otu ebe anyị nwere ike weghachi, tụghachị ma megharia ikike obodo anyị, anyị ga-enwe ike ịmaliteghachi obodo.
Inye ezigbo ihe nlere nke mmegasi ndi mmadu bu ihe kacha mkpa. Imirikiti obodo dị ka akụ na ụba ebe ịda ogbenye na enweghị isi na-ebikọ ọnụ. Kinddị gburugburu ebe obibi, anyị enweghị ike ịhụ foto buru ibu. Ihe omume a dabere na ntule na nhazi nwere ike ime ezigbo uzo ka anyi gh ota usoro ochichi na nke mmekọrịta anyi na Illinois.
Kedu ihe kpatara ọtụtụ mmadụ jiri chọọ nkwado? N'ihi na anyị nwere ike ị nweta ihe karịrị ihe dị mfe maka ịdị adị ọcha. Anyị kwesịrị ịga n’ihu ma hụ otu anyị nwere ike isi kwalite ndụ. Ọ dị mkpa n'ihe banyere ịha nhatanha na mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'akụkụ niile nke ndụ. Enyemaka R3 bụ onyinye enyere ndị otu na-anaghị akwụ ụgwọ maka ebumnuche ichebe ndị obodo Illinois wee mepụta ọnọdụ ka mma maka ndị otu niile.
Kedu ka ndị enyemaka R3 si emetụta sistemụ Social Social Illinois?
Enyemaka ego R3 na Illinois ga-enyere aka kwado ndị otu na mpaghara ndị agha na - agha ọgwụ ọjọọ metụtara. Site na mmepe nke itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị zuru oke na ọtụtụ akụrụngwa na mmepe mmepe, anyị ahụla uto nke ime obodo na Illinois na mpaghara ndị gbara ya gburugburu. Ọ pụtara na ọganihu nke ụdị akụ na ụba niile bụ nsogbu ziri ezi mgbe niile.
Nkewa nke ahịa na mmepe nke mpaghara ndị ọzọ emetụtara, ndị jisiri ike ịchọta nguzo ha na ụba, ga-abụ ihe dị mkpa n'ịmepụta ịha nhatara mmadụ. Anyị tozuru oke ma nwee mpako ịnata enyemaka R3 dịka akụkụ nke mmegharị mmekọrịta mmadụ na Illinois ebe anyị nwere ike ịhụ ihe dị mkpa ka emeziwanye n'akụkụ niile nke ndụ.
Mgbe ụfọdụ, ọ na -adị mfe ikwu karịa ime. Mana Onyinye enyemaka R3 itinye aka na smart ebe ọ bụla ha hụrụ ebe ziri ezi. Etinye ego na itinye ego bu ihe kachasi diri anyi niile. Ọ bụ ya mere iji obi eziokwu na ịrara onwe onye nye onye ọ bụla nwere ike ịmepụta ihe anyị niile na - agba mbọ - obodo ka mma.
Na Illinois, anyị nwere ike ịhụ mgbanwe dị ukwuu na mgbochi nke ime ihe ike na mmetọ ụmụaka. A na-akọ ọtụtụ ikpe nke mmekpa ahụ ka anyị na-amalite iche maka ọha mepere emepe ebe ụmụaka na ndị enyi ha na ndị otu ezin’ụlọ ha ga-elekwa anya n ’ime mpụ.
N'otu oge ahụ, nrụrụ aka na ime mpụ na Illinois anọwokwa n'ọdụ mmiri ruo ogologo oge. O doro anya etu gọọmentị Illinois si eme ka nrụgide dị n’etiti ndị pere mpe mepụtara atụmatụ iji gbanahụ usoro. Ugbu a, ọkachasị mgbe a na-eji Covid-19 mpụ na Illinois agbadala nke ukwuu. Ọ bụ nsonaazụ nke nnukwu nhọrọ ebe anyị hụrụla otú ndị uwe ojii nwere ike isi gbanwee ma zụlite usoro ziri ezi maka njirimara mpụ.
Kedu ihe dị mkpa na iwu Illinois mgbe ọ na-erute Mmemme R3?
Ka anyị na-ekwere na enyemaka ndị ọrụ obodo, ka anyị ga-amatakwu mgbanwe nke ọha. N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị nwere ike ịhụ echiche nke enweghị ike gbasara ikike mmadụ na ntinye mmadụ. Ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime anyị na-akwado maka ikike nke ndị ka nta na mpaghara metụtara mpaghara, anyị ga-amalite iche maka ọnọdụ mmekọrịta ka mma maka anyị niile.
N'oge ụfọdụ, obere mgbanwe nwere ike rụọ ọrụ ebube. Anyị nwere ike ịhụ ihe kpatara sistemu na-elekọta mmadụ ji achọ ndozi n'akụkụ niile. Anyị nwekwara ike ịhụ ihe kpatara ụfọdụ ndị otu na-achọ enyemaka karịa karịa ndị ọzọ. N'ime ọkụ a, anyị nwere ike ịmepụta echiche nke ga-ejere ndị otu anyị niile na ndị ọrụ anyị niile ọrụ na ụdị ọrụ niile.
Illinois bụ steeti ebe mmepe nke mpaghara niile dịkwa mkpa dịka mmepe nke mpaghara mpaghara nnukwu ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike ịhụ ka ego enyemaka R3 rutere ebe ndị mmadụ bi na-adịghị mma n'ọnọdụ dị mma, mana ha ka jisiri ike na-elekọta ezin’ụlọ ha. Ndị a kwesịrị ịma ụzọ niile ha nwere.
Site na nsonye mmekọrịta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ ga-ekwe omume ịhụ uru nke mweghachi, ịgha ọzọ, na nrụzigharị enyere ọtụtụ ndị otu na Illinois.
Illinois ga-aga n'ihu ịzụlite atụmatụ ndị ziri ezi?
Ọ bụrụ na anyị jikwaa ike onye ọ bụla, anyị ga-achọpụta otu itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mpaghara nwere ike isi rụpụta ezigbo ihe. Anyị ga-ahụkwa otú ụlọ ọrụ dị iche iche ma ama si dị mkpa nke na-enye aka na mmemme onyinye dị na akụkụ niile nke ndụ.
Ulo oru di iche-iche di iche iche kwesiri iwehaghari azumahia ha. Ọ ga --emekwu ohere maka obere ụlọ ọrụ iji nye nkwado maka obodo dị iche iche. N'iburu ọganihu, anyị kwesịrị iche maka otu ndị bi na Illinois.
Ọdịdị siri ike na itinye aka nke ụlọ ọrụ niile nwere ike ịmepụta ọnọdụ kacha mma maka anyị niile. Issuesfọdụ nsogbu siri ike, anyị kwesịrị iji nlezianya na ibu ọrụ zuru ezu. N'aka nke ọzọ, anyị kwesịrị ịmepụta atụmatụ iji chepụta iwu dị adị na nzukọ iwu dị na Illinois.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ mgbanwe nke mmụba nke egbe, ịda ogbenye ụmụaka, enweghị ọrụ, na mkporo, anyị kwesịrị ime dịka ohere ndị a dị. Iwu omume ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ịnwere mpempe akwụkwọ iji kwụsị iwu ahụ wee mepụta nke ọhụrụ maka otu ikpe ahụ.
Ọ bụ ya mere maka ịkpụ wii wii na Illinois. Ọ ga-abụ ikpe ahụ n'ọtụtụ isi ihe ndị ọzọ nke a lere anya ugbu a na-akwadoghị
Anyị dị njikere ịhụ otu esi enyere obodo ndị chọrọ mmepe akụ na ụba aka, mgbochi ime ihe ike na ikpe ziri ezi na-elekọta mmadụ. Ulo oru, ndi otu nta, ndi na achoghi uru, na ntule nke iwu na udu di ugbua nwere ike inyere anyi aka ime ka obodo aka di nma na Illinois, ebe anyi gha ebi karia ma nwekwaa nkpa mgbe anyi na-akparịta ihe di nkpa.
Ndụ obibi na Illinois na-aba ọgaranya karịa mgbe anyị na-ahụ obodo niile nwere otu ohere. Ọ bụ ya mere ọrụ enyemaka R3 na ihe omume ndị yiri ya ji enye anyị ngwọta dị anyị mkpa iji chọta ebe kwesịrị ekwesị maka ndị otu obodo ọ bụla.